Dowlada Somaliya iyo AMISOM oo furay xarun laga qorsheeyo howlagalladda ka dhanka ah Al-shabaab. | Dayniile.com
Home Warkii Dowlada Somaliya iyo AMISOM oo furay xarun laga qorsheeyo howlagalladda ka dhanka...
Dowlada Somaliya iyo AMISOM oo furay xarun laga qorsheeyo howlagalladda ka dhanka ah Al-shabaab.
Muqdisho waxaa laga furay xarun cusub taas oo ay Ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa AMISOM si wadajiraa ugu qorsheeyaan howlgaladda ka dhanka ah Al-shabaab islamarkaana ka duulaan tagaan, kadib xaflad lagu daah furayay oo ay ka qeyb galeen taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka, Gen. Odowaa Yuusuf Raage iyo taliye ku xigeenka ciidamada AMISOM ee qaabilsan howlgallada iyo qorshayaasha, Maj.Gen.William Kitsao Shume.
Xarunta ayaa waxaa laga hirgaliyay xerada Xalane gaar ahaan waaxda Howlgalka AMISOM, iyadoo ay si wada jiraa u maamuli doonaan saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa xogga dalka, si sare loogu qaado qorsheynta iyo isku dubaridka howlgallada milateri ee ka dhanka Ururka Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Gen Odowaa , ayaa sheegay iney muhiimad ay leedahay iskaashiga ka dhexeeya SNA iyo AMISOM si loo socodsiiyo xarumaha laga hirgeliyay dhammaan goobaha AMISOM ay mas’uulka ka tahay.
Taliyaha ayaa sidaan yiri “Guusha xarumahaan waxay ku xirnaan doontaa xiriirka labada xarumood ee SNA iyo AMISOM, iyo sida ay iskugu dubbaridaan u wakiilashada shaqada qeybaha, kuwaas oo markaa fuliya awaamiir kasta oo noocaas ah si loogu guuleysto fulinta iyo hirgelinta. Dhankeenna waxaan ku bixin doonaa dadaal badan si ay taasi u dhacdo, ”ayuu yiri Gen. Odowaa.”
Xaruntaan Muqdisho laga furay mid ka mid ah lix xarumood, kuwaas oo dhowaan laga hirgaliyay dalka oo dhan, iyadoo la tixraacayo talooyinkii Shirkii Taliyayaasha Qeybaha, oo la qabtay horaantii sanadkan.
Sidookale Wuxuu sheegay Gen. Odowaa in AMISOM iyo SNA ay sameysteen xiriir shaqo oo wanaagsan sanadihii la soo dhaafay, isagoo xusay in waayo -aragnimada noocaas ah ee ay wadaagaan labada ciidan ay awood u siin doonto inay hagaajiyaan xarunta.
“Waxaan aaminsanahay wadashaqeynteena soo jireenka ah iyo waayo -aragnimada aan helnay sanado badan ayaa naga caawin doonta inaan sida ugu wanaagsan uga soo baxno xaruntan si aan uga hortagno caqabadaha na horyaalla. Aan ka faa’ideysanno xarunta oo aan wanaajino fursad kasta oo aan seegi lahayn, ka hor inta aan la aasaasin xarunta, ”ayuu raaciyay Gen. Odowaa.
Dhinaca kale, Maj. Gen. Shume, ayaa isna tilmaamay in daahfurka xaruntani ay muhiim u tahay xaqiijinta hadaf la wada leeyahay oo ah in dalka oo dhan laga helo xarumo si buuxda u shaqeeya.
Dhankiisa, Maj. Gen. Don Nabasa, taliyaha qaybta 1aad ee howlgalka AMISOM ayaa ku celceliyay muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah loo qorsheeyo, isagoo xusay in hirgelinta xaruntan iyo dhowr kale oo dalka oo dhan ah, ay gacan ka geysan doonto sidii wax looga qaban lahaa qaar ka mid ah caqabadaha ay la kulmaan labada ciidan.
Wuxuu yiri “Si wax ku ool ah loo sameeyo hawlgal kasta, qorshayntu waa tan ugu muhiimsan. Sidaa darteed, waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa’ideysto inaan uga mahadceliyo SNA iyo hoggaanka AMISOM hindisahaan cajiibka ah ee lagu abuurayo Unugyada Isku -xirka Hawlgallada Wadajirka ah dhammaan qaybaha. Tani waxay hubaal noqon doontaa inay soo afjarto farqigii u dhexeeyey qorshaynta wadajirka ah, ”ayuu yiri Maj. Gen. Nabasa.
Ciidamada Xoogga Dalka iyo Kuwa AMISOM ayaa wado dagaalo ka dhan ah Al-shabaab oo ay ugu saarayaan deegaanada ay dalka ugu sugan yihiin, iyadoo Al-shabaab ay weeraro ka geestaan muqdisho oo iskugu jira dilal iyo qaraxyo islamarkaana waxyeelo ba,an ay kasoo gaarto shacab markaasi halkaa ka agdhow.
Previous articleErgeygii Mareykanka u qaabilsanaa Haiti oo is casilay
Next articleFarmaajo iyo Rooble oo heshay ka gaaray xurguftii u dhaxeysay
Ciidamo daacad u ah kooxda Ahlu Sunna ayaa maanta dagaal la’aan kula wareegay deegaanka Ceeldheere oo qiyaastii 30-km u jira magaalada Dhuusomareeb ee caasimada...